Vatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi reCouncil for Student Teachers, COST pamwe nevamwe vadzidzi vepaBelvedere Teachers College vasungwa neMuvhuro mangwanani.
Vadzidzi ava vange vari kuratidzira vachitsutsumwa nedanho riri kutorwa nechikoro ichi rekuvharira panze vadzidzi vasina kubhadhara yechikoro pamwe nekuramba kuti vaite hurongwa hwekubhadhara zvikwereti zvavo padi pdiki sezviri kurudzirwa nehurumende.
Mapurisa anodzivirira nyonga nyonga arova vadzidzi kubva kumajoreji akasiyana siyana avo vange vachiritidzira paBelvedere Teachers College ndokusunga mutungamiri weCOST, VaWalter Muzamani, nevamwe vadzidzi gumi.
Vadzidzi, ava vasere vari madzimai nevarume vatatu, vaendeswa kukamba yemapurisa yeMilton Park ndokuzoendeswa kuHarare Central
Rimwe remagweta avo, VaPaidamoyo Saurombe vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vadzidzi vange vari kuratidzira murunyararo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga.
VaSaurombe vati vadzidzi ava varohwa zvakaipisisa nemapaurisa.
Vati mapurisa anoratidza kuti ari kuda kuti vadzidz ava varare muchitokisi uye vati vanotarisira kuti vachaenda kudare mangwana kana nemusi weChitatu.
Munyori musangano rinomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union, VaTapaiwanashe Chiringa vashora zvaitwa nemapurisa vachiti hurumende inofanira kupa vadzidzi dzidzo kwete mboma.
VaChiriga vati ZINASU yave kupindira munyaya iyi uye vachiramba vachiratidzira paBelvedere Teachers College nemamwe makoreji ari kurambidza vadzidzi kuta zvidzidzo zvavo.
VaChiriga vati hapana asingazive kuti zvinhu zvakaoma munyika vakatiwo denda reCovid-19 ndiro rimwe riri kutadzisa vadzidzi kubhadhara mari inodiwa yese sezvo vabereki vavao vakarasikirwa nemabasa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru weBelvedere Teacher College, Amai Julia Ruramai Mbofana sezvo nharembozha yavo yange isiri kubatika.
Hatinawo kukwanisa kunzwe kubva kugurukota redzidzo yepamusoro, VaAmon Murwira sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Comissioner Paul Nyathi vato vange vasati vapirwa nyaya iyi zuye vange vasisi muhofisi.